विदेशबाट लगानी भित्र्याएको एनएमबी बैंकका सिइओ भन्छन्, “म सेलिब्रेटी बैंकर होइन” - Narayanionline.com
विदेशबाट लगानी भित्र्याएको एनएमबी बैंकका सिइओ भन्छन्, “म सेलिब्रेटी बैंकर होइन”
काठमाडौँ, १८ माघ-
पछिल्ला दिनमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा एउटा फरक खालको विज्ञापन बजिरहेको छ । साना तथा मझौला कर्जा प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको विज्ञापनले धेरैले ध्यान आकर्षित गरेको छ । कृषक आफ्ना कृषि उपज व्यापारीलाई बिक्री गरिरहेका छन् तर त्यहीमध्येकी एक कृषक अर्थात् रङ्गमञ्चकी कलाकार लक्ष्मी बर्देवा आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज व्यापारीलाई बेच्न छाडेर आफैँ उद्यम गर्न थालेका छन् । यही सामान्य लाग्ने विषय समेटिएको विज्ञापनले भन्ने सन्देश हो, ‘साना तथा मझौला उद्यम गर्न चाहुनुहन्छ भने एनएमबी बैंकमा आउनुस् र सहजै कर्जा लिनुस् ।’
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै जोडिएको बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पुग्दा साँझको ५ बजेको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुनिल केसी विभागीय बैठकमा हुनुहुन्थ्यो सायद । बैठक सक्ने बित्तिकै हामी उनसँग गफिन थाल्यौँ । उनले आफ्नो बैंकिङ ‘करियर’, बैंकको लगानी तथा भावी दिशाका बारेमा सविस्तार हामीलाई सुनाए ।
“३० वर्षे बैंकिङ करियरमा हरेक दिन हरेक मिनेट मेरा लागि सिकाइका समय बनिरहेका छन् । सुखमा मात्तिइन्, दुःखमा पनि आत्तिने बानी छैन । हरेक क्षणलाई सदुपयोग गरेको छु । त्यसैले नै मलाई सफलता दिएको छ”, उनले भने, “बैंकिङ आफँैमा रिस्की क्षेत्र पनि हो तर यसलाई फुकी फुकी विचार गरी गरी अगाडि बढ्दा सफलता मिलेको छ ।”
बैंकिङ क्षेत्रका शुरुआती दिनहरु अहिले जस्तो सहज थिएन । तीनवटा सरकारी बैंक थिए भने तीनवटा निजी क्षेत्रका त्यसमा पनि विदेशी लगानीका बैंक थिए । बैंकिङ कारोवार गर्न असाध्यै गाह्रो थियो । उपभोक्ता बैंक खोज्दै जानुपर्दथ्यो तर अहिले बैंकहरुले ग्राहक खोज्दै हिँडेका छन् । तत्कालीन ग्रिन्डलेज बैंक हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सहायक पदबाट बैंकिङ करियर शुरु गर्नुभएका केसी यतिबेला एउटा सफल बैंकरका रुपमा चिनिन् छन् ।
जीवनका पयो खोल्दै जाँदा उनले सफलताका कथा मात्रै सुनाउनु भएन भीषण दुःखका पत्र पनि खोले । जीवन सिकाइ हो, अनुभवले खारिँदै जाँदा दुःख पनि सुखमा परिणत हुँदै जान्छन्, मैले सिकेको जीवनमन्त्र यही हो, भाग्यले यहाँसम्म पु¥यायो, केसीको मुहारमा विगतमा ती दिन ताजा बनेर आए ।
जतिबेला सामान्य एलसी खोल्नसमेत महिना दिन लाग्थ्यो, ग्राहकहरु भौँतारिँदै हिँड्थे । बैंकका कर्मचारी कुनै छुट्टै ग्रहबाट आएका जस्ता थिए । समयले परिवर्तन ल्यायो, सोच बदलियो, मान्छेका चाहना र अवसर पनि बदलिए । बैंक उद्योगका रुपमा विकास हुँदै गयो, आज म जहाँ छु, त्यो मेरो मेहनतको परिणाम हो, केसी विगतमा हराउनुभयो । भने, “सहायक पदबाट जागिरे जीवन शुरु गरेको मेरा लागि बैंकको उच्च पद प्राप्त हुनु नै सफलताको उच्चतम विन्दु हो । मेरा लागि परिवारको सहयोग, अनि भाग्य दुवै सफलता कारक बने । सिकारु मेरो चरित्र आज पनि उस्तै छ ।”
उनले आफ्नो आनीबानीका बारेमा समेत बताए । केही समय स्ट्याण्र्डड चार्टडमा गुजारेपनि एनमएबी फाइनान्स हुँदै विकसित भएको आजको एनएमबी बैंकका हरेक शाखामा काम गरेको अनुभव पनि उनका लागि सहयोगी बने । “म सेलीब्रेटी होइन, तर अवसरको भने सदुपयोग गरे । यो नै मेरो जीवनको सफलताको यात्रा हो । तपार्इं यसलाई के भन्नुहुन्छ आफँै भन्नुस्”, उनले हामीतिर नै आफ्नो प्रश्न छाडिदिए । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब २६ करोड नाफा आर्जन ग¥यो । ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि सञ्चित मुनाफा रु ५४ करोड ८९ लाख र शेयर स्वाप अनुपातबाट रु ६० करोड ३६ लाख जगेडा कोषमा राखेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा क्रान्ति नै ल्याएको नेपाली साझेदार सहितको होङ्सीमा नेपाली बैंकहरुले रु १६ अर्ब लगानी गरेका छन् । त्यसमा एनएमबीले मात्रै ६ अर्ब ७५ करोड लगानी गरेको छ । सिडिसीको नेपाल प्रवेश पनि सोही बैंकबाट भएको हो । गत फागुनमा सिडिसीले बैंकलाई रु एक अर्ब ५० ऋण दिएको छ । त्यो सिडिसीको पहिलो लगानी थियो ।
देशको विकासका लागि पहिले आन्तरिक स्रोतको जोगाड गराँै भन्नेतर्फ ध्यान दिएको छ एनएमबीले । गत वैशाख १ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीले शुरु गर्नुभएको सबै नेपालीको बैंक खाता अभियानले सार्थक सफलता पाइरहेको छ । पूँजी निर्माण गर्ने र बैंकिङ पहुँच पु¥याउने त्यो एउटा सुवर्ण अवसर नै थियो । खर्च गर्ने मात्रै होइन बचत गर्ने पनि बानी पनि बसाल्ने अभियान हो त्यो । ‘खोलाँै खाता’ भन्ने नाराले बैंकिङ उद्योगलाई सहयोग गरेको छ ।
दुःख गर्ने किसानले केही नपाउने, उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थाको अन्त्यका लागि कृषि उद्यमशीलतालाई जोड दिएको छ बैंकले । काम गर्न सक्ने ६० लाख कामदार विदेशमा छन् । “उनीहरु सीप सिकिरहेका छन् । उनीहरु फर्केर आउँदा नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनोस् भनेर हामी लागेका छौँ”, लगानीको विराट क्षेत्र देखिरहेको केसीले सुनाए । नेपालमा रहेको अपार सम्भावना पानीमा बगेर गइरहेको छ । त्यो सम्भावनालाई यथार्थतामा परिणत गर्ने केसीको सोँच छ ।
बैंकले कृषिको अलावा ऊर्जा क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरेको छ । जलविद्युत्का अलावा वैकल्पिक ऊर्जामा पनि ध्यान दिएको छ । नेपाललाई मध्यस्तरीय आय भएको देश बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै ऊर्जा हो । पछिल्ला १५ वर्षमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीले ठूलो योगदान गरेको छ । व्यापारिक घराना पनि ऊर्जामा लगानी गर्न आएका छन् । त्यसमा एनएमबी बैंकको ठूलो साथ छ भन्छन् केसी ।
सो बैंकले मात्रै ४० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरेको छ । रु १६ अर्ब बराबरको कर्जा प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनएमबी बैंकको साझेदार संस्था पनि ऊर्जामा लगानी केन्द्रित गर्न चाहन्छ । डचहरुको वित्तीय संस्थासँग एनएमबी बैंक जोडिएको छ । नेदरल्यान्डको एफएमओ बैंकको साझेदार हो । सो संस्थाको १५ प्रतिशत शेयर एनएमबीमा छ । दिगो विकास गर्न दीर्घकालीन लगानी गराँै भन्ने उनीहरुको सोच छ । ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुको पछाडि सोही कारण भएको केसी बताए ।
बैंकले सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी गरेको छ । रुफ टफ सोलार परियोजनामा पनि त्यसमा समेटिएको छ । नेट मिटरिङ गर्ने कार्यविधि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ल्याएको छ । “विद्युत् पर्याप्त हुने वित्तिकै नयाँ प्रकारको लगानी जुट्छ । रासायनिक मल कारखाना खुल्छन् । नयाँ सिमेन्ट उद्योग खुल्छन् । “लागत घटेपछि मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन्छ”, उनले भने । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा माथि नै ऊर्जामा लगानी गरेको केसीले तथ्याङ्क पेश गरे ।
“लोडसेडिङ हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाग्यो, हामीजस्ता बैंकहरुले पनि लगानी ग¥यौँ । आजको दिनमा जश प्राधिकरणले लिन्छ तर बैंकको लगानी पनि कम छैन नि ? देश उज्यालो भएको जश हामीले पनि पाउनुपर्छ”, केसी केही स्वार्थी देखिए ।
“हामीले दिगो विकास गर्ने क्षेत्रका रुपमा ऊर्जालाई लियाँै”, उनले भने, “नेपालमा ३६० दिन घाम लाग्छ, सौर्य परियोजनामा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ । हामी गरेको कामले भावी पुस्तालाई पनि फाइदा पुग्ने हुनुपर्छ ।”
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यलाई पछ्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था लागेका छन् । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा जम्मा पार्दा पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्माण गर्ने स्रोत जम्मा हुँदैन । लगातार आठदेखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । उनले ‘क्वान्टम लिप’को कुरा गरे । नेपालको पूँजीले मात्रै त्यो छलाङ हान्न नसक्ने अवस्था छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण लिन डराउनु हुँदैन तर त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ उनले सुनाए । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ऋण छ । अरू देशले ७५ प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिएका छन् ।
संसारभर दिगो विकासका लागि फाइनान्सिङ गर्ने कोष छन् । डच फाइनान्सले लगानी गरेको र स्वपूँजी नै राखेकाले पनि एनएमबीलाई सजिलो भएको उनको धारणा छ । “नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा हामीले केही नयाँ गराँै भन्ने लाग्यो । अरू बैंकभन्दा फरक छन् हाम्रो लगानी गर्ने मोडल । यसअघि नै विदेशी संस्थाले लगानी गरेका कारण पनि हामीलाई सजिलो भयो”, उनले भने, “पुराना वैधानिकताले पनि काम ग¥यो । नेपालमा पैसा चाहिने समय आयो भन्ने भएपछि हामीले विदेशी संस्थाबाट पैसा ल्यायौँ ।”
गत आवमा मात्रै १३ खर्ब जतिको व्यापार घाटा भयो । त्यसलाई घटाउने दायित्व सरकारको मात्रै होइन होला ? हाम्रो पनि हो भन्ने ठानेर आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधि बढाउन केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । “विदेशबाट आएको भन्दा ठूलो परिणाममा पैसा विदेशिएको छ । त्यसलाई रोक्न केही न केही त अवश्यै गर्नुपर्छ नि ?”, उनले भने । कूल ३०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरेको छ । साना, मझौला र मध्यमस्तरका उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रदेश–१, प्रदेश–५ र गण्डकीमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ बैंकले । भौगोलिक हिसाबले बजार पहुँच विस्तारका लागि मर्जरमा गएको केसी विस्तारमा सुनाए । बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्ता सरकारले प्राथमिकता दिएका नै हुन् ।
अधिकाशं ग्राहक सन्तुष्ट छन् किनकि विदेशीदेखि स्वदेशी लगानीकर्ता पनि खुशी छन् । कर्मचारी सञ्चयकोषसमेत बैंकको लगानीकर्ता हो । डिजिटल बैंकिङमा पनि उस्तै ध्यान दिएको छ । ग्राहकलाई पछिसम्म सम्झने खालको सेवा दिएका छौँ, उनले आफ्नो बखान आफैँ गरे तर सत्यमा टेकेर । भने, “ नेपालको कर्पोरेट बैंकिङ एवम् सुशासनमा एनएमबी बैंक अरूभन्दा धेरै माथि छ ।”
सो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसी केही क्षण चुप लागे । “बाहिरबाट हेर्दा सवारीसाधनमा भएको लगानी अनुत्पादक नै लाग्न सक्छ तर संसारभर नै अटो फाइनान्सिङ भइरहेको छ । त्यसले आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ भन्ने पनि देखिन्छ तर हाम्रोमा बाध्यता छ । सार्वजनिक सवारीको अवस्था बेहाल छ । मानिसहरु गाडी नै नभए पनि मोटरसाइकल भने पनि किनौँ भन्ने अवस्थामा छन्”, उनले भने ।
रेल सञ्जाल विस्तार नभएको अवस्थामा बाध्यता नै छ अटोमा लगानी उनले हाम्रो धरातलीय यथार्थ सुनाए । आर्थिक गतिविधि बढेर नेपाल विस्तारै फैलिँदैछ । सवारीसाधन अत्यावश्यक नै भइसकेको छ । त्यसका कारण यो उत्पादनशील क्षेत्र नै हो ।
ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन छँदैछ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम ब्याजदर छ तर निक्षेपकर्ताको पनि हित हेर्नुपर्छ । उनीहरुलाई मार्ने कुरा भएन । मूल्य वृद्धिको मात्रा पनि हेनुपर्नेछ, उनको जिकिर छ ।
एकल विन्दुमा ब्याजदर ल्याउने विषय पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने कुरा भएको उनको भनाइ छ । बढी ब्याजदर भएको कुरा गलत हो । हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ”, उनले स्पष्टिकरण दिने शैलीमा भन्नुभयो ।
“फरक प्रणाली र कार्यशैली भएका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गराउनु जटिल विषय हो, तेरो र मेरो भन्ने हुँदोरहेछ”, उनले अनुभव सुनाए, “राम्रो योजना भएन भने जटिलता हुन्छ तर हामीले सबैलाई मिलाएर ल्याएका छौँ । कर्मचारीलाई तेरो र मेरो भन्ने गरेका छैनाँै । फरक चिन्तनमा काम गर्नेको मनोविज्ञान बुझेर परिचालन गरेका छौँ । सांस्कृतिक रुपमा एक ठाउँमा ल्याउने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ”, उनले भने ।
नेपाली बैंक पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर स्रोत जुटायो । नेपालका बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त स्थापित संस्थाबाट रेटिङ भएको थिएन । त्यसैले सबैका लागि त्यो नयाँ काम थियो तर अप्ठेरासँग जुधेर बैंकले विदेशबाट पैसा ल्यायो र लगानी गरेको सगौरव बताउछन् केसी । “विदेशीले पनि पत्याउँदा रहेछन, पैसा ल्याउने हैसियत पनि राख्दोरहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । त्यस्तो सन्देश प्रवाहले अन्य प्रकारका व्यवसाय विस्तारका लागि हामीले अवसर पायौँ”, उनले भने ।
बैंकले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न थालिसकेको छ । रु ३० खर्ब निक्षेप भएको बजारमा चार–पाँच अर्ब विदेशबाट ल्याउँदैमा खासै अर्थ राख्दैन तर नजिर स्थापना गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण थियो । विदेशबाट ऋण ल्याउने बेलामा एनएमबीको डिडिए गरियो । त्यसले पनि धेरै कुरा सिकायो बैंकलाई । त्यो घटनालाई कोसेढुङ्गाका रुपमा लिन्छन् केसी ।
एक प्रतिक्रिया on “विदेशबाट लगानी भित्र्याएको एनएमबी बैंकका सिइओ भन्छन्, “म सेलिब्रेटी बैंकर होइन””
7.5% को होम लोन अहिले 13.75% हामीले तिरेकै छाैंं । अरू Financial tools त अाउदैन तिमीहरूलाई ।
दैलेखमा स्वास्थ्य बीमा शुरु
नेपालमा थप १६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १७ हजार ३४४ पुग्यो
यी हुन् सरुवा हुने एसपी र डिएसपी
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो
मोटरसाइकल चढ्न मानेका थिएनन् देवचुलीका सङ्क्रमितले